Doodii ugu Adkayd oo Wasiiro Puntland iyo Galmudug ka tirsan Looga Qabtay dagaalka magaalada Gaalkacyo +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Doodii ugu Adkayd oo Wasiiro Puntland iyo Galmudug ka tirsan Looga Qabtay dagaalka magaalada Gaalkacyo +Cod
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa ka taagan Xiisad dagaal oo u dhaxaysa Ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug, Waxaana Barnaamij Dood ah oo loo qabtay Wasiiro ka tirsan Labada dhinac kuwaasi oo ka qayb galay Barnaamijka Maan-hadal ee Idaacada Daljir.
Barnaamijka ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Maamulka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur (Taardhuleed) iyagoo aan waxba isku Reeban.
Wasiirka Amniga Galmudug ayaa yiri “Anigu been sheegi maayo Ciidan is horfadhiya xabad inay joojinayaana ma balan qaadi karo, beenta iyo khiyaanada shacabkooda puntland baa ku caan baxday, Nidaamka Cabdiweli iyo Xukuumadiisu ma qabo inay samatabixin karaan dadka Gaalkacyo,” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Wasiirka Hawlaha guud ee Puntland ayaa yiri “Taar-Dhuleed haduu AK47 soo rido qoriga ugu weyn baan madaxa kaga jarayaa waayo waa nabad diid, Anagu Difaac ayaanu Nahay, Taar-dhuleedoow Jooji Weerarka “ .
One thought on “Doodii ugu Adkayd oo Wasiiro Puntland iyo Galmudug ka tirsan Looga Qabtay dagaalka magaalada Gaalkacyo +Cod”
Wariyaha dhaxdhaxaadin xumaa suaalaha ugu a dag waxuu weydiinayaa wasiirka galmudug iyo wasiirkii puntuland dagaal naageed ku jira Shabaab waaye kuye maxeey tahay sababta uu waryaha u weydii waayey in uu gudi wasiiraa xaliyaan arinta xabad joojinta kadibna odayaasha wadahadlaan